Web Browsers ရဲ History တွေကိုဘယ်လို Clear လုပ်ရမလဲ။ ~ mgkhainghtoo
Web Browsers ရဲ History တွေကိုဘယ်လို Clear လုပ်ရမလဲ။
01:02 မောင်ခိုင်ထူး No comments
Web browsers တွေရဲ History တွေကိုဘယ်လိုရှင်းရမလဲ။ ဘာလိုရှင်းဖို့လိုသလဲ့ ဆိုရင်
History တွေကိုဖြက်ပေးခြင်းအားဖြင့် Browsers တွေဟာအရင်ကလိုဘဲ မြန်ပါလိမ်မည်
မဖြက်ပေးရင်တော့ နှေကွေးနေပါလိမ်မည် ဒါကြောင့် History တွေကိုဖြက်ပေးဖို့လိုအပ်ပါ
Google Chrome ရဲ History ကိုဘယ်လိုရှင်းရမလဲဆိုရင်တော့ ပလေယာ လေးလိုပုံ Click
လိုက်ပါပြီးရင်တော့ Tools ကိုသွားလိုက်ပါ ပြီးရင်တော့ Clear Browsing data ကိုသွားလိုက်
ပြီးရင်တော့ အောက်ကလိုမြင်ပါလိမ်မည် the beginning of time ကိုရွှေ History
အကုန်ဖြက်ခြင်ရင်တော့ ပြီတော့ Clear Browsing date .
Firefox ရဲ History ဖြက်နည်း ပုံထဲမှာမြင်းတဲ့ အတိုင်းပါဘဲ Firefox ရေးတဲ့ဟာကို
Click လိုက်ပြီးတော့ History ပြီးတော့ Clear Recent History .
ကိုလိုရှင်တာကို Click လိုက်ပါ ကျွန်တော်ကတော့ အကုန်လုံးဖြက်ခြင်တယ် ဒါကြောင့်
Everything ကို Click လိုက်မယ်။
ကိုလိုခြင်တာကို Select လုပ်လိုက်ပါ ပြီးရင်တော့ Clear Now .
IE ရဲ History ကိုရှုင်းမယ် Wheel ကလေးကို Click လိုက်ပါပြီးရင်တော့ Safety ပြီးရင်
Delete Browsing History ကို Click လိုက်ပါ။
ပြီးရင်တော့ History ပြီးတော့ Delete !